Inqubomgomo Yobumfihlo ye-eTN - eTurboNews | Amathrendi | Izindaba Zokuhamba
Ikhaya » Inqubomgomo Yobumfihlo ye-eTN
Inqubomgomo Yobumfihlo ye-eTN
eTurboNews, Inc (eTN) ishicilela le Nqubomgomo Yobumfihlo ye-Intanethi ukukwazisa ngemikhuba yethu ephathelene nokuqoqwa nokusetshenziswa kwemininingwane osinikeza yona ngokuxhumana nale webhusayithi namanye amawebhusayithi axhumene ne-eTN. Le nqubomgomo ayisebenzi kulwazi oluqoqwe ngezinye izindlela noma olulawulwa ezinye izivumelwano.
Siyiqoqa Kanjani Imininingwane
I-eTN iqoqa imininingwane yakho ngezindlela ezahlukahlukene, kufaka phakathi uma ubhalisa ne-eTN kule webhusayithi, lapho ubhalisela izinsizakalo ze-eTN ngale webhusayithi, lapho usebenzisa imikhiqizo ye-eTN noma izinsiza ngewebhusayithi, lapho uvakashela amawebhusayithi e-eTN noma amawebhusayithi abalingani abathile be-eTN, futhi uma ufaka amaphromoshini asuselwa ku-Intanethi noma ama-sweepstake axhaswe noma aphethwe yi-eTN.
Lapho ubhalisa kuwebhusayithi yethu, sicela futhi siqoqe imininingwane efana negama lakho, ikheli le-imeyili, i-zip code, kanye nomkhakha. Kweminye imikhiqizo nezinsizakalo singacela ikheli lakho nolwazi mayelana nawe noma izimpahla zebhizinisi lakho noma imali engenayo. Lapho usubhalisile ne-eTN futhi ungena ngemvume kumasevisi ethu, awuzifihli kithi.
Abasebenzisi bangakhetha ukubamba iqhaza ezinhlotsheni ezahlukahlukene ze-eTN (izinsizakalo ze-imeyili), ezisukela ezindabeni zansuku zonke kuya kuzinto ezishisayo zabaphakeli. I-eTN iqoqa imininingwane yomuntu maqondana nokubhaliswa nokusetshenziswa kwezinsizakalo ezinjalo.
Abasebenzisi bangakhetha ukubamba iqhaza kumaphromoshini kanye / noma imincintiswano yokuphromotha eyenziwa yi-eTN ngezikhathi ezithile egameni lamakhasimende ayo. I-eTN iqoqa imininingwane yomuntu ephathelene nokubhaliswa komsebenzisi nokubamba iqhaza kulokhu kukhushulwa kanye nemincintiswano.
Izinhlelo Zokufundisa kanye Nemihlangano
Abasebenzisi bangakhetha ukubamba iqhaza ezinhlelweni nasemasemina eziqhutshwa yi-eTN ngezikhathi ezithile. I-eTN iqoqa imininingwane ephathelene nokubhaliswa komsebenzisi kanye nokubamba iqhaza ezinhlelweni ezinjalo.
“Amakhukhi” izingcezu zolwazi ezincane ezigcinwa yisiphequluli sakho kwi-hard drive yekhompyutha yakho. I-eTN noma abakhangisi bayo bangathumela ikhukhi kwikhompyutha yakho ngesiphequluli sakho. I-eTN isebenzisa amakhukhi ukulandelela izicelo zamakhasi nesikhathi sokuvakasha komsebenzisi ngamunye nokusetshenziswa kwamakhukhi kusivumela ukuthi sinikeze isiphequluli somsebenzisi imininingwane ehambelana nezintandokazi nezidingo zezivakashi futhi nokwenza lula ukuvakashelwa komsebenzisi kuwebhusayithi yethu. Ungakhetha ukuthi uyawamukela amakhukhi ngokushintsha izilungiselelo zesiphequluli sakho. Ungasetha kabusha isiphequluli sakho ukuthi senqabe wonke amakhukhi noma uvumele isiphequluli sakho sikukhombise lapho kuthunyelwa ikhukhi. Uma ukhetha ukungawamukeli amakhukhi, isipiliyoni sakho kuwebhusayithi yethu nakwamanye amawebhusayithi singancipha futhi ezinye izici kungenzeka zingasebenzi njengoba kuhlosiwe.
I-eTN ithola ngokuzenzakalela futhi iqophe imininingwane kuzingodo zethu zeseva kusuka kusiphequluli sakho, kufaka phakathi ikheli lakho le-IP, imininingwane yamakhukhi we-eTN, nekhasi lewebhusayithi olicelile. I-eTN isebenzisa lolu lwazi ukusiza ukuxilonga izinkinga ngamaseva ethu, ekuphathweni kohlelo, nasekuhloleni ithrafikhi yewebhusayithi yethu ngokuhlangene. Imininingwane ingaqoqwa futhi isetshenziselwe ukuthuthukisa okuqukethwe kumakhasi ethu eWebhu nokwenza ngezifiso okuqukethwe kanye / noma ukwakheka komsebenzisi ngamunye.
Uma uthenga okuthile kuwebhusayithi ye-eTN, sidinga ukwazi imininingwane ekhomba wena uqobo njengegama lakho, ikheli le-imeyili, ikheli lokuposa, inombolo yekhadi lesikweletu kanye nosuku lokuphelelwa yisikhathi. Lokhu kusivumela ukuthi sicubungule futhi sigcwalise i-oda lakho futhi sikwazise ngesimo se-oda lakho. Lolu lwazi lungasetshenziswa futhi yi-eTN ukukwazisa ngemikhiqizo nezinsizakalo ezihambisanayo. Imininingwane yekhadi lesikweletu ngeke yabelwe noma ithengiselwe abantu besithathu abangahlangene nganoma iyiphi injongo ngaphandle kwemvume yakho, ngaphandle kwalapho kunesidingo ukucubungula ukuthengiselana.
Uma ukhetha ukusinikeza imininingwane yakho, siyisebenzisa ngokuyinhloko ukuletha insizakalo oyicelile. I-eTN ingasebenzisa imininingwane yakho ngezindlela ezahlukahlukene kubandakanya okulandelayo:
I-eTN ingasebenzisa imininingwane yomuntu siqu ukuqoqwa ngewebhusayithi yayo ukuthumela ukukhushulwa kwe-imeyili okuhlosiwe egameni labakhangisi bayo nabalingani bemboni.
O eTN ingahlanganisa imininingwane ephathelene nawe esinayo nolwazi esiluthola kozakwethu bebhizinisi noma kwezinye izinkampani ukuze sikulethe kangcono imikhiqizo nezinsizakalo ezingaba nentshisekelo futhi zikusize.
I-eTN ingasebenzisa imininingwane yomuntu siqu ukuxhumana nabasebenzisi maqondana nokuvuselela ukubhaliswa kwezinsizakalo nemikhiqizo ye-eTN.
I-eTN ingasebenzisa imininingwane ekhomba umuntu uqobo ukuthumela isaziso sama-eTN noma imikhiqizo nezinsizakalo zozakwethu ngezindlela ezinjenge-imeyili kanye / noma iposi leposi.
o Uma uhlinzeka ngolwazi lwezezimali, sisebenzisa lolo lwazi ngokuyinhloko ukuqinisekisa isikweletu sakho futhi siqoqa izinkokhelo zokuthengile, ama-oda, okubhaliselwe, njll.
I-eTN ingathumela izimemezelo zomkhiqizo noma ama-e-edishini akhethekile kubabhalisi be-inthanethi.
o Uma ubamba iqhaza kuhlelo lwezemfundo lwe-eTN, ingqungquthela, noma olunye uhlelo oluzwela ngesikhathi, singaxhumana nawe ukukukhumbuza ngezinsuku zokugcina noma imininingwane eyengeziwe maqondana nalezi zinhlelo.
I-eTN kwesinye isikhathi yenza ababhalisile kanye / noma izinhlolovo zabasebenzisi ukukhomba kangcono okuqukethwe kwethu kuzethameli zethu. Imininingwane ehlanganisiwe eqoqiwe kwesinye isikhathi yabiwa nabakhangisi bethu, noma kunjalo, ngeke sabelane ngolwazi lomuntu siqu nomuntu ovela eceleni.
I-eTN isebenza ngamawebhusayithi amaningi aqukethe okuqukethwe nezinsizakalo ezihlobene nokuhamba. I-eTN ingabelana ngemininingwane yomuntu siqu eqoqwe kubasebenzisi bamawebhusayithi ayo ngaphakathi kuwo wonke la mawebhusayithi ukuze isebenzele kangcono abasebenzisi bayo.
I-eTN inemikhiqizo nezinsizakalo eziningi ngakho-ke kunezinhlu eziningi zama-imeyili nezenyuso. Ngomzamo wokuvumela abasebenzisi ukuthi bahlele ukubamba kwabo iqhaza ezinsizakalweni nasezenyuselweni ze-eTN, i-eTN inikeza abasebenzisi ikhono lokukhetha izinhlu ezithile noma imikhiqizo enentshisekelo nezinketho zokuphuma zingumkhiqizo nokusetshenziswa / kuhlu oluthile. Zonke izinyuso ze-imeyili ezithunyelwe zisuka ku-eTN zinikela ngesixhumanisi sokuphuma ezansi kwe-imeyili ngokulandela lapho abasebenzisi bangakhetha ukuphuma emikhiqizweni ethile nasenyuselweni. Uma uthola enye yalama imeyili futhi ufisa ukuzikhipha ohlwini sicela ulandele imiyalo enikezwe ku-imeyili ngayinye noma oxhumana naye [i-imeyili ivikelwe]
Ngezikhathi ezithile singasebenzisa imininingwane yamakhasimende ukwenza okusha, okungalindelwe okungazange kuvezwe ngaphambilini kunqubomgomo yethu yobumfihlo. Uma imikhuba yethu yolwazi ishintsha ngesikhathi esithile ngokuzayo sizothumela izinguquko zenqubomgomo kuwebhusayithi yethu.
Ukwabelana Ngemininingwane Eqoqwe Nabantu Besithathu
Ngokuvamile, i-eTN ayiqashisi, ayithengisi, noma yabelane ngolwazi oluyimfihlo ngawe nabanye abantu noma izinkampani ezingekho emisebenzini ngaphandle kokunikezela ngemikhiqizo noma ngezinsizakalo ozicelile, lapho sinemvume yakho, noma ngaphansi kwezimo ezilandelayo:
Singanikezela ngemininingwane yangasese mayelana nabasebenzisi bethu kozakwethu abathembekile nabathengisi abasebenza egameni le-eTN ngaphansi kwemfihlo kanye nezivumelwano ezifanayo ezivimbela ukusetshenziswa kwalawa maqembu imininingwane. Lezi zinkampani zingasebenzisa imininingwane yakho yangasese ukusiza i-eTN ukuxhumana nawe mayelana nokunikezwa okuvela ku-eTN kanye nabalingani bethu bokumaketha. Kodwa-ke, lezi zinkampani azinalo ilungelo elizimele lokusebenzisa noma lokuhlanganyela lolu lwazi.
o Lapho ubhalisela uhlelo lwezemfundo, umncintiswano, noma okunye ukuphakanyiswa okuxhaswe umuntu wesithathu, umuntu wesithathu uzonikezwa imininingwane ekhomba yena uqobo ngaphandle kwalapho kuthunyelwe ngenye indlela maqondana nokuphromotha.
o I-eTN ngezikhathi ezithile ingabelana ngemininingwane yomuntu efana namakheli e-imeyili nabantu besithathu abathembekile abahambisa okuqukethwe okungenzeka kube nentshisekelo kumsebenzisi futhi kuncike ekuphoqeleni kokuphuma kohlangothi lolo.
Singabelana ngolwazi lomuntu siqu lapho sinokukholelwa okuhle ukuthi isenzo esinjalo siyadingeka ukuhambisana nenqubo yokwahlulela, umyalo wenkantolo, noma inqubo yezomthetho enikezwe ku-eTN, noma ukusungula noma ukusebenzisa amalungelo ethu asemthethweni noma ukuvikela izimangalo zomthetho.
Singabelana ngolwazi olunjalo lapho sinokholo oluqinile lokuthi kuyadingeka ukuze siphenye (noma sisize ekuphenyweni), sivimbele, noma sithathe izinyathelo mayelana nezinto ezingekho emthethweni, ukukhwabanisa okusolwayo, izimo ezibandakanya izinsongo ezingaba khona ekuphepheni ngokomzimba kwanoma yimuphi umuntu, ukwephulwa kwemigomo yokusetshenziswa kwe-eTN, noma njengoba kufunwa ngenye indlela ngumthetho.
o Uma i-eTN itholwa noma ihlanganiswe nenye inkampani, sizodlulisa imininingwane emayelana nawe kule nkampani mayelana nokutholwa noma ukuhlanganiswa.
Amaqembu okuxoxa nge-imeyili ayatholakala kubasebenzisi bethu kwamanye amawebhusayithi ethu. Ababambiqhaza kufanele bazi ukuthi imininingwane edalulwe kulezi zinhlu zezingxoxo yenziwa ukuthi itholakale kuwo wonke amalungu bese iba ulwazi lomphakathi. Siphakamisa ukuthi uqaphele uma unquma ukudalula noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu emaqenjini anjalo ezingxoxo.
Le webhusayithi ithatha izinyathelo zokuphepha ezifanelekile ukuvikela imininingwane yakho yangasese. Lapho sidlulisa futhi sithola izinhlobo ezithile zolwazi olubucayi njengekhadi lesikweletu nolwazi lokukhokha, siphinda siqondise abasebenzisi kumaseva abetheliwe we-SSL ejwayelekile (i-Secure Socket Layer). Ngenxa yalokho, imininingwane ebucayi oyifaka kuwebhusayithi yethu efana nekhadi lesikweletu nemininingwane yokukhokha idluliselwa ngokuphepha nge-Intanethi.
I-eTN ayinacala nganoma yikuphi ukwephulwa kwezokuphepha noma nganoma yiziphi izenzo zanoma yimuphi umuntu wesithathu othola imininingwane. I-eTN ibuye ixhumane nezinhlobonhlobo zamanye amasayithi futhi iqukethe izikhangiso zabantu besithathu. Asinacala ngezinqubomgomo zabo zobumfihlo noma ukuthi baluphatha kanjani ulwazi olumayelana nabasebenzisi babo.
Mayelana Nobumfihlo Bezingane
Le webhusayithi ye-eTN ayihloselwe ukusetshenziswa yizingane kanti i-eTN ayiqoqi ulwazi ngamabomu ezinganeni. Kufanele ube neminyaka eyi-18 ukufinyelela noma ukusebenzisa leli sayithi.
Vuselela / Shintsha Idatha Yakho
Ukuvuselela ikheli lakho le-imeyili noma ukushintsha okuncamelayo kwe-imeyili sicela uxhumane [i-imeyili ivikelwe]
Izinguquko kule Nqubomgomo Yobumfihlo
I-eTN iyaligodla ilungelo, nganoma yisiphi isikhathi futhi ngaphandle kwesaziso, lokungeza, ukushintsha, ukuvuselela noma ukuguqula le Nqubomgomo Yobumfihlo, ngokumane nje uthumele lolo shintsho, ukuvuselelwa noma ukuguqulwa kuwebhusayithi. Noma yiluphi ushintsho olunjalo, ukuvuselelwa noma ukuguqulwa kuzosebenza ngokushesha lapho kufakwa kuwebhusayithi. Abasebenzisi bazokwaziswa ngoshintsho kule Nqubomgomo Yobumfihlo ngesixhumanisi “esibuyekezwa kusukela ngeso” kwiwebhusayithi ye-eTN.
Yini Okunye Okufanele Ngiyazi Ngemfihlo Yami Lapho Uku-inthanethi?
Iwebhusayithi ye-eTN iqukethe izixhumanisi eziningi kwamanye amawebhusayithi. Iwebhusayithi ye-eTN iqukethe nezikhangiso zabantu besithathu. I-eTN ayinacala ngezenzo zobumfihlo noma okuqukethwe kwalawa mawebhusayithi wesithathu noma abakhangisi. I-eTN ayabelani nganoma yiluphi ulwazi lomuntu siqu olunikeza i-eTN namawebhusayithi axhumene ne-eTN, ngaphandle kwalapho kushiwo kwenye indawo ngaphakathi kwale Nqubomgomo Yobumfihlo, noma ngabe i-eTN ingabelana ngemininingwane ehlanganisiwe nalawo mawebhusayithi (njengokuthi bangaki abantu abasebenzisa iSayithi lethu).
Sicela uthinte lawo masayithi wesithathu ukuthola inqubomgomo yawo yobumfihlo. Lapho i-eTN ifaka okuqukethwe komuntu wesithathu kwelinye lamakhasi ayo e-eTN, i-eTN izosebenzisa imizamo efanelekile ukwazisa abasebenzisi bethu ukuthi sebephumile kuwebhusayithi esebenza nge-eTN futhi bangena kwiwebhusayithi elawulwa yinkampani yangaphandle. Amakhasimende / abasebenzisi kufanele bafunde futhi baqonde noma iyiphi inqubomgomo yobumfihlo ephawulwe kuwo wonke amawebhusayithi wesithathu.
Sicela ugcine engqondweni ukuthi noma nini lapho uveza ngokuzithandela imininingwane yakho ku-inthanethi - ngokwesibonelo nge-imeyili, uhlu lwezingxoxo, noma kwenye indawo - lolo lwazi lungaqoqwa lusetshenziswe abanye. Ngamafuphi, uma uthumela imininingwane yakho ku-intanethi efinyeleleka emphakathini, ungathola imiyalezo engacelwanga evela kwamanye amaqembu ngokubuyisela.
Ekugcineni, nguwe wedwa onesibopho sokugcina imfihlo yemininingwane yakho yangasese. Sicela uqaphele futhi ube nesibopho noma nini lapho uku-inthanethi.
Amalungelo akho Obumfihlo beCalifornia
Ngaphansi kokuhlinzekwa komthetho waseCalifornia, umhlali waseCalifornia onikeze ngemininingwane yangasese kubhizinisi asungule naye ubudlelwano bebhizinisi ngezinjongo zomuntu siqu, zomndeni, noma zasendlini (“ikhasimende laseCalifornia”) unelungelo lokucela imininingwane yokuthi ngabe ibhizinisi lidalule imininingwane yomuntu kunoma yiliphi iqembu lesithathu ngezinjongo zokuthengisa ngqo zabantu besithathu. Ngenye indlela, umthetho uhlinzekela ukuthi uma inkampani inenqubomgomo yobumfihlo enikeza ukukhetha noma ukukhetha ukukhetha ukusebenzisa imininingwane yakho ngabantu besithathu ngezinhloso zokumaketha, inkampani kungenzeka ikunikeze imininingwane yokuthi ungayisebenzisa kanjani izinketho zakho zokukhetha ukudalula.
Ngoba leli Sayithi lenzelwe ukusetshenziswa ngezebhizinisi kuya ebhizinisini, lokhu kuhlinzekelwa komthetho waseCalifornia ngeke kusebenze, ezimweni eziningi, kulwazi oluqoqiwe.
Ngokwezinga lapho umhlali waseCalifornia asebenzisa leli Sayithi ngezinhloso zomuntu siqu, zomndeni noma zasendlini efuna imininingwane embozwe umthetho, leli Sayithi lifanelekela enye inketho. Njengoba kushiwo kuNqubomgomo yethu Yobumfihlo, abasebenzisi beSayithi bangakhetha noma bakhethe ukusebenzisa imininingwane yakho ngabantu besithathu. Ngakho-ke, akudingeki ukuthi sigcine noma sidalule uhlu lwabantu besithathu abathole imininingwane yakho yangasese ngonyaka owedlule ngezinjongo zokumaketha. Ukuvimbela ukudalulwa kwemininingwane yakho yangasese ukuze isetshenziselwe ukumaketha ngqo ngumuntu wesithathu, ungakhethi ukungena kulokho kusetshenziswa lapho uhlinzeka ngemininingwane yakho eSizeni. Sicela wazi ukuthi noma nini lapho ukhetha ukungena ukuthola ukuxhumana okuzayo okuvela kumuntu wesithathu, imininingwane yakho iyoba ngaphansi kwenqubomgomo yobumfihlo yomuntu wesithathu. Uma kamuva unquma ukuthi awufuni lowo muntu wesithathu ukuthi asebenzise imininingwane yakho, kuzodingeka uthinte umuntu wesithathu ngqo, ngoba asinakulawula ukuthi abantu besithathu balusebenzisa kanjani ulwazi. Kufanele njalo ubuyekeze inqubomgomo yobumfihlo yanoma yiliphi iqembu eliqoqa imininingwane yakho ukunquma ukuthi lelo bhizinisi lizoluphatha kanjani ulwazi lwakho.
Izakhamizi zaseCalifornia ezisebenzisa leli Sayithi ngenhloso yomuntu siqu, yomndeni noma yasekhaya zingacela imininingwane ethe xaxa mayelana nokuhambisana kwethu nalo mthetho ngokuthumela i-imeyili [i-imeyili ivikelwe] Kufanele ubeke isitatimende esithi “Amalungelo Akho Wobumfihlo WaseCalifornia” emkhakheni wezihloko we-imeyili yakho. Uyacelwa ukuthi wazi ukuthi kudingeka kuphela ukuthi siphendule isicelo esisodwa kumthengi ngamunye ngonyaka, futhi akudingeki ukuthi siphendule izicelo ezenziwe ngezinye izindlela ngaphandle kwaleli kheli le-imeyili.
Imvume Yakho Kule Nqubomgomo
Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, uyavuma ukuqoqwa nokusetshenziswa kolwazi ngabakwa-eTN njengoba kuchaziwe kule nqubomgomo. Uyacelwa ukuthi wazi futhi ukuthi ukusebenzisa kwakho iwebhusayithi kubuswa yimigomo nemibandela ye-eTN. Uma ungavumelani nemigomo yeNqubomgomo Yobumfihlo noma imigomo nemibandela, sicela ungasebenzisi iwebhusayithi, imikhiqizo kanye / noma izinsizakalo.
Sicela uthumele noma yimiphi imibuzo mayelana nenqubomgomo yobumfihlo ye-eTN ku [i-imeyili ivikelwe]
Qaphela: ISmush ayihlangani nabasebenzisi bokugcina kuwebhusayithi yakho. Okuwukuphela kokukhethwa kukho okufakwayo uSmush anakho ekubhaliseni kwencwadi yezindaba yabaphathi besayithi kuphela. Uma ungathanda ukwazisa abasebenzisi bakho ngalokhu kunqubomgomo yakho yobumfihlo, ungasebenzisa imininingwane engezansi.
USmush uthumela izithombe kumaseva weWPMU DEV ukuzilungiselela ukusetshenziswa kwewebhu. Lokhu kufaka ukudluliswa kwedatha ye-EXIF. Idatha ye-EXIF izophucwa noma ibuyiswe njengoba injalo. Akugciniwe kumaseva we-WPMU DEV.
USmush usebenzisa isevisi ye-imeyili yenkampani yangaphandle (iDrip) ukuthumela ama-imeyili olwazi kumphathi wesayithi. Ikheli le-imeyili lomlawuli lithunyelwa ku-Drip futhi ikhukhi isethwe yisevisi. Imininingwane yomlawuli kuphela eqoqwa yi-Drip.